Kdenlive 20.08 batara na oghere ọhụụ ọhụrụ na ndị ọzọ | Site na Linux
Kdenlive 20.08 batara na oghere ọhụụ ọhụrụ na ndị ọzọ
Na nso nso weputara ohuru nke Kdenlive 20.08 onye editọ vidiyo dị iche iche na ndozi, fixes na mgbanwe ndị pụtara ìhèdị ka nke ọhụrụ oghere ọrụ na nhọrọ imepụta dị iche icheyana a ohuru ohuru maka nhazi odiyo, n'etiti ndị ọzọ.
Maka ndị na-amaghị Kdenlive, ị kwesịrị ịma nke ahụ nke a bụ ihe ịtụnanya oghe free video nchịkọta akụkọ maka GNU / Linux na FreeBSD, nke na-akwado AVCHD, DV na HDV, ma dabere na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ na-emeghe dị ka FFmpeg, usoro vidiyo MLT, na mmetụta frei0r.
Dịka e kwuru n'elu, ndị Kdenlive na-ewukwasị na usoro MLT vidiyo na ffmpeg, nke na-enye atụmatụ pụrụ iche maka ịgwakọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị mgbasa ozi ọ bụla.
Ihe oru a malitere site na Jason Wood na 2002, ma taa ndi obere ndi oru mmepe na-aru oru ya, ya na nhapụ nke Kdenlive 15.04.0, ọ ghọrọ akụkụ nke ọrụ KDE gọọmentị.
1 Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Kdenlive 20.08
2 Etu esi etinye Kdenlive 20.08 na Linux?
2.1 Ntinye site na PPA (Ubuntu na nkwekọrịta)
2.2 Ntinye site na AppImage
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Kdenlive 20.08
Na ụdị nke editọ ọhụrụ a, otu mgbanwe ndị pụtara ìhè bụ oghere ọrụ ọhụụ, nke atụpụtara inwe ike ịnye nhọrọ nhazi dị iche iche maka ihe ntanetị yana maka ọkwa ọ bụla nke imepụta vidiyo.
Oghere ọhụrụ ahụ bụ:
ndebanye- inyocha weghaara ọdịnaya na tinye na mkpado snippets;
Mbido: iji usoro iheomume deputa vidiyo.
(Da (ọdịyo): iji jikọta ma dozie ụda ahụ.
Mmetụta: iji tinye mmetụta.
Agba: iji dozie ma dozie agba.
Mgbanwe ọzọ na-eme bụ ntinye nke mbu nke oru ohuru maka nhazi ihe. Thedị nke ugbu a na-agbakwunye nkwado maka ọrụ n'otu oge na ọtụtụ iyi egwu, na mgbakwunye na eziokwu na nsụgharị ndị na-esote, a na-atụ anya na a ga-enwe ngwaọrụ maka ịgbagharị iyi iyi na ịwapụta ọwa ọdịyo.
na Mebe ogbe Ogwe na-etinyere na Mmetụta Panel na Clip Ndepụta maka mfe keyframe ukpụhọde na clip igodo.
Na ntọala, a na-ewebata ọhụụ ọhụrụ iji jikwaa caching, nke na-enye gị ohere ijikwa oke faịlị na cache na data nnọchiteanya, yana faịlụ nwere nnomi ndabere. Nwere ike ịhazi oge ndụ nke ihe iji kpochapụ data ochie na nchekwa.
Emebela faịlụ oru ngo a nke oma, esemokwu metụtara nkewa decimal separator (rikoma ma ọ bụ oge), bụ nke kpatara ọtụtụ ọgbaghara, ka edozila. Ọnụ mgbanwe gbanwere ndakọrịta azụ Kdenlive 20.08 faịlụ oru ngo (.kdenlive) na nsụgharị ndị mbụ.
Nke mgbanwe ndị ọzọ na-apụta ìhè:
Imeziwanye arụmọrụ mgbe ị na-ewepụta thumbnails maka faịlụ ọdịyo ma na-egwu usoro ihe oyiyi JPEG.
Agbakwunyere ikike nke itinye akara akara na otu ọnọdụ na clip ahụ.
Gbakwunye ntọala iji tinye ogwe ụda n'okpuru vidiyo ahụ na-enweghị ekpuchi ya.
Agbakwunyere bọtịnụ iji chekwaa otu ọrụ ahụ.
Agbakwunyere ntọala maka ịhazi oke mkpirisi na mkparịta ụka nhọrọ ọsọ.
Agbakwunyere nhọrọ iji chekwaa aha ma tinye ha ka ị rụọ ọrụ n'otu nzọụkwụ.
Agbakwunyere ikike igbanwe agba nke thumbnails ụda.
Emeela ka ụda ngwakọta ụda.
Etu esi etinye Kdenlive 20.08 na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye ụdị ọhụrụ a, Ikwesiri ịgbaso ntuziaka ndị anyị na-akọrọ gị n'okpuru.
Echichi I nwere ike ime ya site na imeghe ọdụ na ime iwu na-esonụ na ya:
Ntinye site na PPA (Ubuntu na nkwekọrịta)
Methodzọ ọzọ iji wụnye ngwa a na sistemụ gị bụ site n'enyemaka nke nchekwa. Ya mere, usoro a dị irè maka Ubuntu na nkwekọrịta ya.
Na ọnụ ha ga-eme iwu ndị a:
Ugbu a, ha ga-emelite nchịkọta ha na ndepụta nchekwa na:
N'ikpeazụ, ha ga-etinye ngwa ahụ site na ịme iwu ndị a na ọnụ:
Ntinye site na AppImage
N’ikpeazụ usoro ikpeazụ maka nkesa Linux ọ bụla dị ugbu a bụ nbudata ngwugwu AppImage.
Na ọnụ anyị ga-eme iwu ndị a:
Anyị na-enye ikikere igbu na:
N'ikpeazụ ha ga-enwe ike ime ngwa ha site na ịpị ya abụọ ma ọ bụ site na njedebe na:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Kdenlive 20.08 batara na oghere ọhụụ ọhụrụ na ndị ọzọ
Kali Linux 2020.3 bịarutere na mgbanwe site na bash ruo ZSH, ndozi maka HiDPI na ndị ọzọ